निन्द्रामा हुने सबै कठिनाइ भगाउने केहि घरेलु उपायहरू – rastriyakhabar.com
तपाइलाइ पनि राति निन्द्रा आउदैन भने यी घरेलु उपायहरू जरूर अपनाउनुहाेस । याे घरेलु उपायले तपाइलाइ राम्राे निन्द्र दिनुकाे साथै तपाइलाइ अन्य स्वस्थ्य लाभ मिल्छ ।
अहिलेकाे समयमा निन्द्र नआउने समस्या बढ्दै गएकाे छ । यसकाे धेरै कारण छन् । बढ्दाे प्रदुषण जसका कारण वायु प्रदुषण देखि लिएर ध्वनि प्रदुषण सम्म सहभागी छन् । याे बाहेक तपाइकाे काम गर्ने तरिका र लाइफ स्टालमा पनि भर पर्छ तपाइकाे राम्राे निन्द्रमा नआउनुमा । राम्राे निन्द्र नअाउनुमा माेवाइल, टिभी, र कम्प्यूटर पनि यसकाे भागेदार हुन् । यी त भए राम्राे निन्द्रा नआउनुका कारण तर राम्राे निन्द्राका लागि के गर्ने त ? याे प्रश्न जाे काेहिकाे मनमा हुन्छ । अब दिक्क मान्नु पर्दैन हामीले यहाँ पँच यस्ताे घरेलु उपाय बताउन गइरहेका छाै जसले तपाइलाइ राम्राे निन्द्रा दिन मद्दद गर्छ । त्यसैले ढिला किन गर्नु आउनुहाेस् जानै ५ घरेलु उपाय ।
राति सुत्नु भन्दा पहिले हात खुट्टा मजाले धुनुहाेस् । त्यसपछि खुट्टा पुछेर कुर्कुचामा सरसोंकाे तेल लगाएर मजाले मालिस गर्नु । यसले शरीरमा रक्त प्रवाह (ब्लड सर्कुलेशन) राम्राे सँग हुन्छ । तपाइ आनन्द महसूस गर्नुहुनेछ र तपाईलाइ राम्राे निन्द्रा आउनेछ ।
के खाने सुत्नु भन्दा पहिले
सुत्नु भन्दा पहिले एक मुठ्ठी चेरी खानुहाेस् । चेरीले तपाइकाे शरीरमा मेलाटोनिन हार्मोनकाे प्रोडक्शन बढाउछ । यसले तपाइकाे शरीरकाे सिस्टमलाई राम्राे सग कन्ट्राेल गरेर दिमागलाइ आनन्द गराउछ साथै राम्राे निन्द्र लगाउन मद्दद गर्छ । यसलाइ खान मन नलागे यसकाे जूस भनाएर सुत्नु भन्दा पहिले पिउन पनि सक्नु हुन्छ ।
दिउँसाे केरा खानुहाेस्
केरामा भिटामिन ६ पाइन्छ । जुन हाम्राे शरीरमा निन्द्रा सगँ जाेडिएका हार्मोन्सको अज राम्राे सग काम गर्न मद्दद गर्छ । याे बाहेक यसमा भएकाे पाेटाशियम र म्याग्नेशियमले पनि तपाइलाइ तनावमुक्त गराउछ र राम्राे निन्द्र ल्याउने काम गर्छ । तर ध्यान दिनुहाेस् रूघा मर्कि भए यसलाइ नखानुहाेस् ।
दुधकाे सेवन पनि लभदायक
दुधमा हुने ट्राइपटोफन अमिनो एसिडले तपाइकाे शरीरमा मेलाटोनिन हार्मोन बढाउछ । मेलाटोनिनले तपाइकाे दिमागलाइ धेरै आनन्द दिन्छ र रात भरि तपाइलाइ राम्राे निन्द्रा आउछ । यसैले सुत्नुभन्दा पहिले एक गिलास दुध पिउनुहाेस् ।
बदामले दिन्छ राहत
सुत्नु भन्दा पहिले १०-११ बदाम खएमा राम्राे निन्द्रा आउछ । यसमा भएकाे म्याग्नेशियन धेरै जसाे निन्द्रामा प्रयाेग हुन्छ । याे बाहेक तपाई सुत्नु भन्दा पहिले चिया, कफि वा अल्काेहल यसकाे सेवन नगर्नहाेला । यस्ले तपाइकाे निन्द्रामा बाधा ल्याउछ ।
अफिसमा छिर्नेबित्तिकै १० मिनेट यसो निदाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? अवश्य पनि तपाईं एक्लै हुनुुहुन्न र आशा मरिसकेको छैन । हामी राम्रोसँग सुत्न चाहन्छौं, तथापि धेरैलाई गाह्रो हुन्छ । अहिलेको समयमा यस्तो समस्या भोग्ने तपाई एक्लो हुनुहुन्न । यस्ता धेरै मानिसहरु यस्तै समस्या भोगिरहेका हुन्छन् ।
यहाँ हामीले अपुरो निन्द्रा हुने कारण र त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने असरका जानकारीहरु संकलन गरेका छौँ । आशा छ, तपाईले सम्पुर्ण लेख पढेर यसबारे जानकार बन्नुहुनेछ ।
दिमागमा हुने एउटा प्राकृतिक हर्मोन मेलाटोनिनले हाम्रो निन्द्रा तथा व्यँुझने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्छ ।जब रात पर्छ शरीरले मेलाटोनिन निस्कासन गर्छ । त्यसपछि बेडमा पल्टिन मन लाग्छ ।
शान्त निन्द्रा र गहिरो सक्रीय निन्द्रा । गहिरो निन्द्राले कुनै जटिल समस्या आउँदा सामना गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
न्यानो पानीको सावर, ध्यान, शान्त बनाउने संगीत, हल्का चिसो तापक्रमयुक्त कोठा (६८ डिग्री फरेनाईट), तथा बेडमा जानुअघि पूर्ण रुपमा कोठामा पर्दा लगाएर सुत्दा राम्रो निन्द्रा लाग्छ । ल्याभेन्डरको बासना कोठामा छर्दा पनि निन्द्रालाई सहयोग पु¥याउँछ । यसले रक्तचाप र छालाको तापक्रम घटाउँछ ।